बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ? जानौं - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ? जानौं
पानी हाम्रो जीवनका लागि अति आवश्यक चीज हो तर के तपाइलाई यो थाहा छ कि दैनिक बिहान बासी मुखमा पानी पिउनाले जो हाम्रो मुखमा एक किसिमको राल हुन्छ त्यो हाम्रो पेटमा पुगेर कयौं रोगहरुबाट बचाउँछ ।राल मुखमा बन्ने यस्तो पदार्थ हो जसले एन्टीसेप्टीकको जस्तो काम गर्दछ र हामीले थाहै नपाइ कयौं रोगबाट बचाइ रहेको हुन्छ । पानी पिउनाले शरीरका कयौ रोग निको हुन्छ, पानीले छालाकोको रोग लाइ पनि हतपत लाग्न दिदैन भने विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्न दिनबाट बचाउन पनि पानीले धेरै ठूलो सहायता गर्दछ । यदि पानीलाई बिहानै बासी मुखमा पिउने गरियो भने यसको फाइदा सुनेर तपाइ पनि अचम्ममा पर्न सक्नु हुनेछ । आउनुहोस जानौं पानीलाई कुन समयमा कति मात्रामा पिउने? किनकी पानी पिउने सही तरीकाले मात्र तपाईलाई स्वस्थ राख्न सक्दछ ।
सुत्नुभन्दा पहिले पानी पिउनाले मुटु रोगका बिरामीहरुलाई फाइदा पुग्दछ । यसले मुटुलाई नर्मल अवस्थामा राख्नुका साथै हर्ट अट्याक बाट पनि जोगाउँदछ ।नुहाउनुभन्दा पहिले एक गिलास पानी पिउनुस जसले हाइ ब्लडप्रेसर लाइ कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ ।साँझको खानाभन्दा पहिले यदि तपाइले १ गिलास पानी पिउनुभयो भने यसले पेट भरिनेहुनाले धेरै खानाको जरुरत पर्दैन जसले तपाइलाइ शरीर मोटाउनबाट जोगाउद छ ।तपाइ जुन स्थानमा भएपनि तपाइ यदि तनावमा पर्नु भयो भने तत्काल १ गिलास पानी पिउनुहोस यसले तपाइको दिमागलाई शान्त राख्न मद्दत गर्दछ र तपाइको तनाव पनि कम हुन्छ ।
मित्रहरु पानी पिउने नियमलाई यदि तपाइ पनि सुधार गर्नु हुन्छ भने यसबाट हुने फाइदा तपाइलाइ पनि मिल्न थाल्दछ । जसले गर्दा तपाइ आफ्नो स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नु हुनेछ ।त मित्रहरु यो थियो एक जानकारीमुलक भिडियो । यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ । यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्तहरुलाई शेयर अवस्य गर्नुहोला ताकि वहाँहरुलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस ।
यसरी भएको रहेछ महिलामाथि ‘काँटी’ आक्रमण (भिडियो)
एका बिहानै यी ५ चिज देखियो भने तपाईको पुरै दिन हुनेछ शुभ !शेयर गरौँ
रत्नपार्कमा रातपरेपछि सुरु हुन्छ सर्मिलाको व्यापार